Vala iMegaupload | Kusuka kuLinux
UTina Toledo | | I-GNU / Linux, Izaziso
Abasebenzeli bakahulumeni abavela esifundazweni saseVirginia baphoqelele ukuvala isiza, esingasatholakali kwi-WEB. Abantu abayisikhombisa nezinkampani ezimbili bathweswe icala lokuba yingxenye ye "nhlangano yamacala obugebengu yamazwe omhlaba okusolwa ukuthi iyona ebhekene necala lokugebenga umhlaba wonke jikelele."
Izindaba, kunjalo, zisabalale kulo lonke i-WEB ngokushesha okungathi kufana nezindaba zakudala ... kepha cha, konke kwenzeke emahoreni ambalwa adlule. Ukuphendula kuye kwahlukahluka njengoba izinhlobo zabasebenzisi zikhona kulo mhlaba obonakalayo, ubukhulu balesi senzo abukabalwa kusukela ukuvalwa kwale sayithi akuthinti nje kuphela lawo masayithi abamba izixhumanisi zokulandwa okungekho emthethweni, kepha ngisho equkethe okokusebenza okungaphuli noma imuphi umthetho. Okuyiqiniso ukuthi amasayithi afana peliculasyonkis.com, seriesyonkis.com, surfthechannel.com, taringa.net, thepiratecity.org kanye mulinks.com. iwe emahoreni ambalwa ngenxa yomphumela we-domino.
Okwamanje umbuzo wezigidi zamadola uthi kuzokwenzekani ngamalungelo abantu besithathu? Kuzokwenzekani ngemali yabo bonke labo basebenzisi abathembele ekukhokheleni insizakalo "kaNdunankulu" yokusingatha owabo umsebenzi? Ngabe bazothathwa njengabavikelwe noma kuzofanele baye enkantolo? Okwamanje akwaziwa.
Iqiniso ukuthi ngenxa yalesi senzo, esisemthethweni noma cha, esihlukumezayo noma cha, umvikeli wezintshisekelo noma cha ... izenzo zokuqala zokuziphindisela sezivele zenziwe kumawebhusayithi e UMnyango Wezobulungiswa wase-United States (www.justice.gov) kanye newebhusayithi ye Universal (www.universalmusic.com) ngokuhlanganyela Anonymous.
Kulabo abafuna ukuyifunda, nayi incwadi ephelele yesimangalo: Icala leMegaupload
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Megaupload ivaliwe
IMexico isivele isendleleni efanayo engcolile njengeSOPA ...
Bheka ukuze ubone okwenzeke kuwe: http://imageshack.us/photo/my-images/341/capturanx.jpg/
Ngizihlole i-xD ngifaka igalari yami ekuyigcineni phakathi kwamanje kuya kumhla zingama-24 kule nyanga, njengoba i-dA isingathwe e-US nokuthi njenge-megaupload, kunokuningi kokuqukethwe okungekho emthethweni (okubizwa nge- "fanart" noma "fanfiction") ngoba ... ngokusemthethweni, lolo hlobo lomsebenzi wobuciko alukho emthethweni ngoba omunye njengomdwebi akazange abuze owokuqala ukuthi kungakhiwa yini umsebenzi othize noma cha ...
Kungakho ngikhathazeka kakhulu, kimina "fanwork" noma "fandom" izindlela ezinhle zokukhuthaza ubuqambi, futhi i-SOPA ne-PIPA ziyizithiyo kulokho.
Ngisebenzisa futhi ngikhulume ngenye ingxenye yohlamvu lwemali ... izenzo ezenzekile kulawa mahora ambalwa ngu Anonymous:
Bakwazile ukukhipha amasayithi alandelayo ku-inthanethi (ngaphandle kwe-inthanethi):
- UMnyango Wezobulungiswa wase-United States (www.justice.gov)
- Okubanzi (www.universalmusic.com)
- I-Motion Picture Association yaseMelika (http://MPAA.ORG)
- Ukuqopha Imboni Association of America (RIIA.ORG)
- Ihhovisi le-copyright lase-US.
Kepha akugcini lapho ... ehoreni lokugcina noma ezimbili, amanye amasayithi ehlile:
- Warner Umculo (wmg.com)
- Ikhasi le-FBI (fbi.gov) nalo liwela cishe imizuzu engu-7 ... futhi ngokusobala, selivele lingaphezu kwesisodwa ...
Lokhu ngeke kuphele lapha ... nakanjani ngeke.
Isiginesha Yomuntu Ongaziwa icace KAKHULU:
I-AnonOps (@anonopsOne) into iqinisekile: SILINDELE! #Ukuthwala
Lokhu nakanjani sekuba ngcono futhi kungcono 😀
Lapha eChile, ngemuva kokuvalwa kweMegaupload, kwavela iHashtag kuTwitter efundeka kanjena: #JuntenPorno, jjajajajajajajajaja kusangihlekisa.
Ezinye zazo sezivele ziku-inthanethi futhi, ezinye zithanda Universal basephansi. Ngaphambi kokubhala isihloko bengingabaza uma ngizoveza inothi kuphela -ukuthi ngenze kanjani ekugcineni- noma uhlele ngayo ... lolu daba luyinkimbinkimbi kakhulu.
Uma sikubona ngothando kufanele ngivume ukuphathwa kwe- Ukulayishwa kwe-Megaupload uma kuvumela ukusingathwa kwamakhulu ezinkulungwane zempahla ephule umthetho ngoba kubo ibimele ibhizinisi elihle, kepha abasebenzisi abaningi Ukulayishwa kwe-Megaupload Babelane ngalolo daba ngendlela engathandeki futhi, futhi, iningi labo alitholanga nje kuphela inzuzo kepha baxhasa lo msebenzi ngamaphakethe abo.
Mhlawumbe ukubonakaliswa okuyisibopho ngemuva kwalo mcimbi kungukuvalwa kwe- Ukulayishwa kwe-Megaupload Ngabe ukuhlaselwa inkululeko yokukhuluma, noma ngabe ukuvalwa kwesayithi abanikazi balo abavumela ukuthi kwephulwe umthetho ngoba belinenzuzo kubo?
Ekugcineni, yini ngamunye wethu ayiqondayo njengenkululeko yokukhuluma kwi-Intanethi? Ngabe ukwenza lokho esifuna ukukwenza ngoba sikwazi ukukwenza noma ukwenza okulungile? Ngabe i-WEB kufanele ibe yisayithi elilawulwa nguwe uqobo? Uma kunjalo, ungayilawula kanjani ngokwakho?
Ngikholwa wukuthi lolu daba ludlulela ngalé kokuziqhenya FBI ukuvala isiza nomphakathi -Igama elingaziwa- ukulwa, angikungabazi lokho ngokuthembeka, ngenkululeko engingayiqondi namanje.
Uma sazi ukuthi izinto azilula kangako, ngiyavuma ukuthi kudingeka umthethonqubo othile ngoba abantu banelungelo lokuvikela okudaliwe kwabo, yize iSOPA, uSinde. Ama-Lleras njll akuyona ifomu elifanele, kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi iMegaupload ayigcini ngokuqukethe amafayela aphula umthetho we-copyright kepha futhi namafayela amaningi womsebenzisi ayizipele zawo, kanye nemininingwane egcinwe lapho.
Ukukunikeza isibonelo, ngingowomphakathi wabashayeli bezindiza ababonakalayo (sindiza izindiza zokulingisa izindiza) futhi enye yezindlela ezisetshenzisiwe kakhulu zokwabelana ngokudubula kanye nokuthunywa bekuyi-MU futhi manje asazi ukuthi kuzokwenzekani ngalolo lwazi, futhi ngeke sazi ukuthi kuzokwenzekani nalabo bantu ababekhokhele i-akhawunti ye-premium. Engikushoyo ukuthi lezi zinhlobo zezenzo azinakuthathwa ngokungafanele, kufanele kube nezimo.
Kuyiqiniso, lesi senzo sephule amalungelo wezinkampani zangaphandle kepha uma ngaphezulu kwabasebenzisi be-6,000 baxhumene nokugenca iwebhusayithi ye FBI Awukwazi yini ukwenza okufanayo ukuvikela amalungelo akho enkantolo?
Noma lokhu kuwuphawu lokuthi abantu sebayekile ukukholelwa ezikhungweni?
Hewu….! Ngisenomuzwa wokuthi konke lokhu kungaphezu kwamandla ami ukukuqonda ngoba inkinga iyinkimbinkimbi ngokwedlulele.
Udaba lubucayi kakhulu ... nginezinto eziningi ku-Backup ezilayishwe ku-MU. Manje ngilahle wonke lawo mafayela ...> _
Ngakolunye uhlangothi (ngiyazi ukuthi kunabathandi be-anime abanjengami lapha), amakhulu ochungechunge, ikakhulukazi "izintokazi ezindala", bonke babenezixhumanisi zabo ze-MU kuphela ... ngoba "Okuthembeke kunakho konke".
… Futhi uma ngikhuluma iqiniso… Ngizizwa ngendlela efanayo nalapho ngathola ukuthi imibhoshongo yamawele yayiwile.
Izimo ezahlukahlukene, kodwa imizwa efanayo.
Yebo, ayikho i-anime kwamanye amasayithi
Ngilahlekelwe ngama-gigabyte angama-60 we-anime alayishiwe nama-gigabytes ayi-10 omsebenzi avela esikhungweni, futhi angisazi ukuthi ngingalulanda kuphi uchungechunge olufana nocezu olulodwa noma isigaxa sabaseshi ngesiCatalan noma isiNtaliyane nochungechunge oludala ngiyangabaza ukuthi zizophinde zilayishwe futhi i-T_T. Lokhu kuthukuthelisa imithetho yomhlaba yokuvikela imininingwane. Bonke abanye, uma kukhona abaseSpain lapha, yazisa ukuthi sakha inkundla yokubika ngalesi senzo.
Sisele ne-YouTube, kepha ukuyibona lapho kuyadonsa. Okungenani uyazi isiNtaliyane nesiCatalan, ngakho-ke uma usesha kuGoogle uzothola izinketho eziningi.
Futhi iSpanishi, ngingumSpanish kepha angikuqondi kahle okushilo.
Ngithi bonke abantu baseSpain, kufanele sihlangane senze isikhalazo enkantolo, lokhu kulula, noma ngabe kungokonakala kuphela, kuyo yonke imali elahlekile noma ukumane ungakwazi ukuthola imininingwane yomuntu siqu.
Hhayi ukuthi kubi kepha ...
Abazukusinaka, bazolalela lowo onemali nathi esinganikeli.
Kubonakala kimi ukuthi into enhle kakhulu ukusihlanganisa, sibheke labo abanomthwalo wemfanelo bese sibabeka esihogweni
Engingakuqondi kahle yilokhu: ngaphansi kwemithetho yeliphi izwe abazogwetshwa? (imithetho ye-copyright kanye ne-anti-piracy iyahluka ngezwe, ngiyaqonda) ngaphansi kwethu? ngoba abamangalelwa babengezona izakhamizi zase-USA, ngokusho engikufundile noma okungenani hhayi bonke.
Imininingwane ukuthi ngicabanga ukuthi, amaseva we-MU ayesemhlabathini waseMelika ... ngakho-ke ngobuchwepheshe bangenza noma yini abayifunayo ngabo 🙁
Ahh enye into engikhathaza kakhulu ukuthi kuthiwa izinkampani azenzi mali ngokugwazelwa. Bambalwa kakhulu abantu abebengathenga ama-play station 2, ama-mp3 players, ama-320 we-Gig hard drive, futhi abambalwa bebezoba nokuxhumeka kwe-inthanethi ngejubane ukube bekungekhona ukuphanga. Ngiyazi ukuthi akukho emthethweni futhi akumele kwenziwe kodwa umbono wokuthi izinkampani ezinjengoSony noma iTelefonica azizuzi ngokwengxenye ekuqothulweni kobulelesi kuyahlekisa.
Umuntu ongaziwa ubeseziphindiselela
Ngubani ongalandi okuthile (okusemthethweni noma cha) ku-Mega Upload? Ngikwenzile, yize kwesinye isikhathi, angikaze ngibe nesibindi.
Ngicabanga ukuthi lo kufanele kube ngumthetho olwa nobugebengu be-Inthanethi: hlasela amasayithi athile bese ubamba labo abanesibopho: abambalwa. Akufanele iphikisane nababeli bezixhumanisi noma ukulandwa kwamafayela: ukuthwebula nokucubungula konke kungaba yindleko enkulu kohulumeni.
Esikhundleni salokho, angivumelani neSOPA. Ngalo mthetho, babezovala noma yiliphi isayithi ngokungafanele. Babengavala ikhasi noma ibhulogi eyayingahlangene nakancane nokugebenga, kodwa lokho kwaveza imibono yokubuka ephikisana naleyo yalabo abafuna ukulawula umhlaba nokusebenzisa imininingwane.
Ngiyaxolisa ngokuvalwa kweMega Upload, kepha ngiyakuncoma ukuhlaselwa kuka-Anonymous. Ngiwuthande kakhulu umbhikisho wayizolo, yize ngizisola ngokuthi uFacebook noTwitter abenzanga lutho. Ukube i-Facebook ibenze okuthile, ibizofinyelela izethameli ezinkulu kakhulu futhi abantu abaningi bazokwaziswa nge-SOPA ne-PIPA. Noma kunjalo.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngibhalise nge-megaupload ukulayisha amafayela ambalwa (isoftware yamahhala) manje sengikuthola lokhu. Angazi sizophelelaphi.
Angiyena umsebenzisi we-Megaupload. Yebo, ngesinye isikhathi ngilande okuthile kusuka lapho, kepha imvamisa bekungamafayela amancane kakhulu abengahlangene nakancane nama-movie, umculo nokunye. Iqiniso ukuthi ukuvalwa kwekhasi elisemthethweni, noma ngabe lisetshenziswe kabi kanjani ngabasebenzisi abathile, kuyisinyathelo esincane sokuqala sokubheka ku-1984, sibheke ezweni elifana nalelo elachazwa nguGeorge Orwell, neBig Brother yakhe ilawula konke.
Ngoba ngalo mthetho wabathathu, bangavala neDropbox, ama-akhawunti we-imeyili, noma iyiphi ibhulogi efake izithombe noma amavidiyo wabanye abantu kanye ne-etcetera ende. Kubukeka sengathi yinto encane, ukushaywa okulula kokuphanga, kepha kuyaqhubeka kakhulu.
Ukuthi umsebenzisi ulanda i-movie akusho ukuthi bayeke ukuyithenga. Mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi, uma uyithandile, tshala imali yakho kuyo. Noma mhlawumbe, noma kunjalo, ngeke - noma ngabe ilandiwe noma cha. Ukusebenzisa izaba zokuvala iwebhusayithi ukuthi izinkampani zilahlekelwe yizigidi ezingama-500 zamaRandi, okungenani, kuvunyelwe ngokomthetho. Ungalahlekelwa kanjani yinto ongenayo? Ukube iMegaupload ibingekho, ngabe amanani alolu hlobo abengalandwa?
Ngicabanga ukuthi ohulumeni nezinkampani, abahlala bekulungele ukukhama umthengi, bafinyelele esiphethweni sokuthi i-Intanethi iyinkundla yempi ebaluleke kakhulu. Ngiyaqonda ukuthi imikhuba engekho emthethweni akufanele ivunyelwe, kepha yini evumelekile nokuthi yini engekho emthethweni? Uma kuyizinkampani kanye nohulumeni abenza umthetho ngomfanekiso wabo nofana nabo, abahlala bephatha kabi futhi belimaza isakhamuzi esijwayelekile, umthetho ubungeke uzwisiswe njengeqoqo lezinyathelo ezenzelwe ukuvikela abacebile kwabampofu?
Isihloko esibanzi nesiyinkimbinkimbi. Uxolo nge-billet.
Ngoba ngaphambi kwesenzo salolu hlobo sesivele siqala ukukhipha izinto kumama.
Namuhla sengikwazi ukufinyelela olwazini lwekhwalithi ephezulu nangaphezulu kunokhokho nokhokho bami, ngithola imininingwane ngaphandle kokwephula amalungelo empahla yengqondo. Nginamathuba amaningi ezenhlalo namasiko kunalokho abakwenzayo. Lokhu kungivumela ukuthi ngicabange ngokukhululeka.
Inani lezincwadi ezisesidlangalaleni lizongivumela ukuthi ngifunde impilo yami yonke ngaphandle kokuncika kunoma yini (futhi ngifunde imibhalo esezingeni elifanele hhayi le nto abashicileli abasithengisela yona muva nje), futhi ngiyakwazi ukuyithola mahhala futhi akuvunyelwe ukusabalalisa. Phakathi kwamanje nokufa inani liyanda.
Okubi kakhulu ukuthi abantu abawasebenzisi ngisho nalawo malungelo, njengoba bethanda ukubona uchungechunge lwe-X kuwebhusayithi olusika ngqo olususelwa kuma-akhawunti we-premium kanye nokukhangisa futhi ngaphandle kokubuyisela leyo mali kubabhali, bakhohlwa ukuthi liyini isiko futhi amalungelo. Yebo, ngombono abazi ukuthi abasebenzisi babo bazisebenzisela ini izinsizakalo zabo, akunjalo?
Ukuvala iwebhusayithi yokwenza inzuzo kufana nokuthile? Yini engakwazi ukubona uchungechunge lwemfashini lwakamuva ngaphandle kokufaka iphenathi kusho okuthile?. Okokuqala kunezinkulungwane zeziteshi ezingancikile enkampanini (izifufula?). Okwesibili kuzoba necala.
Inkinga yangempela engiyibonayo ngabantu ababenama-akhawunti futhi beyisebenzisela amafayela abo. Kepha, ngokwazi kwami, kuyizinyathelo zokuqapha. Ngiqonde ukuthi, akusho lutho, uma kukhona ukuqulwa kwecala, bazonxeshezelwa noma yini noma singamemeza njengesixuku esithukuthele. Noma ngabe akukho emthethweni noma cha, ijaji lizolikhipha.
Vumela ukufaniswa kokuvala i-megaupload ngo-1984 kube nehaba.
Vumelana ngokuphelele nawe. Ngingathanda ukuhlanganyela nawe okuthile engikubhale cishe eminyakeni emine eyedlule (28 Feb 2008) futhi kuyisikhalazo esifana kakhulu nesakho; ngandlela thile Ukulayishwa kwe-MegauploadMhlawumbe ungahlosile, kugcine kuphendukezela indlela abasebenzisi abahlangana ngayo:
«Lowo ngumbuzo osekuphele izinyanga ungizungezile ekhanda lami ... kungani izinkundla zingasafani nakuqala?
Lapho ngingena kwiforamu yokuqala yaseSpain yempilo yami -Akukho ndawo- Kungimangazile inani elikhulu lolwazi ebeliqukethe, ngiyakhumbula ukuthi abasebenzisi balo -abahlali esizibize ngabo, hhayi abasebenzisi- kuveze izingxoxo ezinde nezifudumele ezingqungqutheleni ze-beatle eziholele emakhasini nasemakhasini emibono eyahlukahlukene. Yiqiniso, sasingavumelani kangako, kodwa ngokungangabazeki safunda.
Izakhamizi zazikhona ngoba sasithanda ukuphikisana -futhi ngezikhathi ezithile ulwe- futhi akekho owayekhathalela kakhulu ngokuba khona kwesithangami esingaphansi lapho angalanda khona ama-bootlegs. UDe facto ubengekho.
Futhi impela babengebaningi bethu, mhlawumbe amaphuzu abo, izakhamuzi ezikhuthele kakhulu kepha yebo, iningi labo kwakungu-foristas yonke indawo; uhlakaniphile futhi uyakwazi ukuxoxa ngezombusazwe, umculo noma ubuciko obuhle.
Namuhla ngibheka izithangami futhi ngosizi ngiyabona ukuthi izinto sezishintshile, futhi angikhulumi ngezihloko ezilula noma ezingenangqondo ezifana nokuthi "Yini iBeatle eyayinenzondo enkulu kunazo zonke?" noma "Ucabanga ukuthi ikhala likaRingo limnandi?" Cha angikhulumi ngalokho.
Namuhla sibonga I-RapidShare, i-MegaUpLoad, i-YouSendIt… Futhi izinkundla eziningi seziphenduke uhlobo lwenqolobane enkulu lapho ama-leecher angalanda khona okubanjelwe ngentando. Futhi lokho bekungeke kube yinto embi ukube ibingakhiqizanga nenqwaba yamalungu "esithangami" angamavila akholelwa ukuthi ngokunikela ngamathani wezinto abazilanda bayasebenzisana ukukhulisa isithangami. Lokho bekungeke kube yinto embi futhi ukube bekungengenxa yokuthi iningi lale "minikelo" ikopishwa kusuka kwezinye izinkundla noma amabhulogi bese kumane kunamathiselwe. Abazihluphi nakuphenya noma ukufaka isandla okuthile ngakho ukucebisa ulwazi lwethu.
Namuhla ngizama ukufunda okuthile okuthakazelisayo esithangamini futhi angikutholi okuthokozisayo; kukopishwe futhi kunamathiselwa izindaba ezivela esizindeni somphakathi, izingqikithi ezindala zivuswe ngamafuphi "Kuyathakazelisa kakhulu, bengingazi" kanye "nezingxoxo" kanye "nezingxoxo mpikiswano" ezingavami ukudlula amagama angamashumi amabili. Futhi ngeSpanishi esesabekayo, esibhalwe kabi. Sengathi ukuthayipha amagama angamashumi amabili kwakuthwele isiphambano kuya IGolgotha.
Ngicabanga ukuthi ngabe silahlekelwe yikhono lokuhlanganisa imicabango ehambisanayo, futhi okubi kunakho konke, ngabe sesilahlekelwe yikhono lokukhiqiza imibono uqobo lwabo? Kwakukuphi ukoma kokuphenya ukuze ufunde?
Futhi ngerekhodi, ukungazi akusona isizathu ... iSpanish sami sasibi lapho ngifunda Akukho ndawo futhi ngenxa yalokhu sekuthuthuke ngokumangazayo. Amagama amaningi bengingawaqondi futhi namuhla angisenayo leyo nkinga ngenxa yalezi zinkundla.
Lezi yizinkundla zamanje, futhi okumangalisa kunazo zonke kuzoba yizinkundla zakusasa eliseduze.
Kuningi okufanele ucabange ngakho, futhi kuningi okufanele ukwenze. Lokho angikungabazi. "
Ukuphawula kwami ​​bekungaqondakali ngenxa yokushesha.
Ngiyavumelana nalawo mazwana. Ngiyayithanda imibono oyibeka phambili futhi ngizonikeza umbono wami kancane, futhi mhlawumbe ngihamba ngigqigqe ehlathini bese ngigxila ezindabeni ezingahlangene nezindaba:
Inkinga ukuthi sine (noma sike) sashintshana ngekhwalithi ngobuningi. Ngokwengxenye kungenxa yentando yeningi enkulu ye-intanethi (engeyimbi), ehumusha ingene kubantu abaningi abafinyelela futhi babambe iqhaza, kepha ubunzima bokuthola, phakathi kwawo wonke umsindo, imininingwane ethokozisayo noma ukuhlaziywa kwangempela okungekhona ukuvuselelwa kokuthile okwedlule.
Okunye okuthonya ukwanda kwejubane le-inthanethi namandla we-hard drive, yonke imininingwane incane futhi ukuthanda kwethu ukugcwalisa i-hard drive yethu, ukushintshana ngolwazi oluningi, ama-fastfeeds, njll. Akusakufanelekeli ukwazi izingoma zeqembu, umkhiqizi walo, abaculi, njll. Okubalulekile ukuba nezingoma ezingama-40000 kwi-hard drive yakho, uhhafu wekhwalithi engabazisayo; ukulanda izincwadi eziyinkulungwane, kunokungazifundi; noma ngibone uchungechunge lwakamuva lwaseMelika.
Iqiniso lokufuna ukudla isiko ngokushesha okukhulu lisho ukuthi sichitha isikhathi esincane kakhulu ukulikhetha nokulihlaziya. Sithathwa yinhlama siyidla masinyane kangangokuba asinasikhathi sokuyiphuzisa. Ngamanye amagama, uma sikhetha futhi sidla ngokushesha, izinsalela ezishiywe yisiko zincane ngoba seqe ukuhlaziywa kwangaphambilini, okwalandela nangesikhathi senqubo, ngaphezu kweqiniso lokuthi ikhwalithi yalokho esikudlayo iyahlukahluka. Njengoba lolo lwazi lunomthelela omncane kithina, mhlawumbe lumnandi nje, ngeke sikwazi ukwenza ukuhlaziya okuyinkimbinkimbi, ukufunda, ukuthola ulwazi, njll. Siyazincisha imininingwane eyinkimbinkimbi, lokho okufanele kucatshangwe ngakho, kepha okunothisayo.
Ngiphinde ngangena kulo mdlalo, ngokwesibonelo, ngaphambi kokuthi ngithukulule amadiski ngiye kumanothi okugcina. Manje ngidla umculo omningi kakhulu futhi ngiwubukeza kancane.
Ngaphezu kwakho konke, imininingwane isivele ihlafunwe futhi ichotshozwe kahle kusukela emibonweni yemibono, ngakho-ke abantu abangenhla bahlala kubhabhalazi lwabo lokuthi "Angazi ukuthi yini guru" - othi guru, usho okunye njengokushicilela noma inkampani yokuqopha - kusho lokhu Kuhle noma kubi futhi angisuki kokuhle noma kokubi. Futhi ngaphezulu kwalokho uma uphikisana nami "awazi ukuthi ukhuluma ngani." Ngakho-ke asisacoboli lutho ngoba akukho okuzokuchoboza. Sifuna imininingwane elula, hhayi eyinkimbinkimbi kakhulu, ukuthi uma sichitha isikhathi sicabanga ngayo noma siyicacisa ngeke sikwazi ukuqhubeka nokulanda noma ukuthinta isikrini sokuthinta sedivayisi yami ye-3g.
Ngiyabingelela futhi ngiyaxolisa ngokuhamba emagatsheni
@Tina no @algoban: Lingakanani iqiniso nomqondo omuhle! Iqiniso limnandi, bengingeke ngiliveze kangcono kunawe ngezimpendulo ezimbalwa ezenziwe. 😀
Ngikhuluma into eyodwa kuphela, ngilayisha ama-tracker angasese kanye ne-leecher kanye ne-fansubero endala nami ukuthi basusa i-megaupload, lapho i-shit yemboni ye-anime yezwe lami isilethela i-anime yezingulube kuphela, ithinta kakhulu isimilo sami. Usuku abazinikezela ngalo ekuthumeleni ngisho nalo lonke uchungechunge ngokusemthethweni, bese bekhononda, kuze kube yilolo suku lapho kufanele sikhiphe ubugebengu ngoba okuqukethwe akunalo ngisho nelayisense.
Akukhona ukukhipha izinto kumongo. Ngokubona kwami, nami ngizibika njengomgxeki oqinile wohlelo, "u-1984" akulona usongo oluzayo, kodwa iqiniso langempela futhi elisebenzayo. Imininingwane eyenziwe ngosawoti, imidiya enkulu ithunjelwe ohulumeni nezinkampani ... Impela kunemininingwane eminingi esakazwayo, kepha ... ngaluphi ikhwalithi? Injongo noma ukukhohliswa? Yini inkululeko? Kukhona?
Angikuphiki ukuthi kunabantu abakwaziyo ukuzitholela indlela yabo phakathi kwabantu, kepha akulona yini iqiniso ukuthi abezindaba kanye nohulumeni bafuna izakhamuzi ezakhelwe ngokuphelele ebulilini? Kumele ubone uhlelo lwethelevishini, izindaba emaphephandabeni noma ukunakekelwa okwenziwa yiMelika emfundweni yezizukulwane zayo ezizayo. Ugogo nomkhulu wami empeleni babengenakho ukufinyelela engxenyeni yesiko engangiyenza, kepha ukuhlala ekhejini elikhulu akukwenzi kube inkululeko enkulu.
Lapho ngikhuluma ngokuvalwa kweMegaupload ngalawo magama - mhlawumbe ihaba-, engikwenzayo ukukufaka kulokho okuthiwa ukuvinjelwa kwenkululeko yokuveza imibono ezinye izinhlangano ezibonakala ziyishushisa. Ngokwemvelo, kubonakala sengathi kuvumelekile kimi ukuthi ababhali bavikela indalo yabo, nokuthi ikhasi lokulanda livaliwe akusilo ukuphela komhlaba, yize lingabeka isibonelo esiyingozi. Kufanele uthole ibhalansi bese ubheka lezo ezinye izindlela.
Engifuna ukugxila kukho yizinhlobo kanye nengqikithi yodaba. Umthetho uthi umuntu akanacala aze afakazelwe ngenye indlela, kepha nakhu ukuvaliwe -ukuthi noma ngabe uqaphe kangakanani, kusesekucatshangwa ukuthi unecala-, bese sizobona ... Abasebenzisi bezomthetho, bakhona, bazobona amafayela akho angafinyeleleki, nayo yonke idatha yakho isezandleni ze-FBI. Kungani?
Futhi-ke kukhona amaqembu abantu / izinkampani ezikhuthaze lokhu. Ukuvala ikhasi lewebhu, ukusebenza kwe-FBI ngokusebenzisa, ukufeza izifiso zabakhiqizi noma, njengoba sikhona, sigunyaza i-SOPA / PIPA / ACTA kanye nabangenele bayo, ukusungula intando yeningi yesizukulwane esisha, engenamahloni. Kuyedlula ubulungiswa, leyo chimera enkulu engikholelwa kuyo kancane kancane, futhi ngiyibeka ekusebenzeni kwabanamandla-ngisho nangaphezulu.
Futhi uma sengikushilo konke lokhu, ngifuna ukungeza ukuthi ngokwami ​​ngihlanganyela umbono wakho, owakho nowakaTina Toledo, kepha inani elikhulu lokuhlukumeza okwenziwayo ligcwalisa ingilazi. Mina, iMegaupload ibe yiconsi elilodwa kuphela, eligcine likhiqize ukugcwala kwalo, futhi kungiphatha kabi ukubona ukuthi indlela yokulungisa okuthile kulo mhlaba iyisifinyezo.
Ukuqhathanisa kusabonakala kunehaba.
Imininingwane ingeyekhwalithi oyifunayo. Kukhona okuhle nokubi. Ungakwazi nokusidlulisa ngokwakho.
Angazi ukuthi ohulumeni bafuna ini. Ngiyazi ukuthi ngiyini nokuthi yini engikufunayo, futhi ngiyazi ukuthi nginamathuluzi okucabanga, ngizicabangela ngami ngaphandle kwanoma ngubani ongitshela ukuthi ngicabangeni futhi, ngaphezu kwakho konke, ngibheka indlela yami yokucabanga futhi banginqabele ukuyiveza ngokukhululeka (kusobala ukuthi nginguye kuthonywe izinto eziningi, kepha kungenye impikiswano). Uma abanye abantu bengakwenzi, uma unikezwa ithuba, kuyinkinga yakho.
Ukutholakala okukhulu kwemininingwane kungenza ngicabange ngokukhululeka, imininingwane ikhula ngokuhamba kweminyaka, ikheji?
Ukulawula i-intanethi kuyingozi, kepha kulokhu akunakushiwo ukuthi ukucwaninga, noma ukubhekwa, noma ukulawula imicabango, yingakho ngingaqondi ukufaniswa. Futhi abakuphucanga ilungelo, futhi ngaphezulu kwalokho kusekhona ezinye izindlela ezihlale zingcono (imifudlana). Kunoma ikuphi, bavale iwebhusayithi yohlobo olwenzile inzuzo ngomsebenzi wabanye.
Ukuthi umsulwa kuze kube kufakazelwa ngenye indlela akusho ukuthi akuthathwa izinyathelo zokuqapha. Ezimweni zokubulala, lowo okusolwa ukuthi ungumbulali uvalelwa noma ngabe kusolwa yena kuphela.
Udaba lokuvinjelwa lushiya okuningi okungaziwa okuzoxazululwa. Kuyacaca ukuthi indlela okusingathwa ngayo lesi simo bekungeyona enhle. Kanye nemithetho ehlukene esekuzanywe ukuyifeza. Kepha lokho akusho ukuthi abantu abakwazi ukwehlisa ohulumeni namuhla.
Umphakathi unamandla amakhulu kunalokho ucabanga futhi uzimisele ukuwasebenzisa. Uma uhulumeni evumela umthetho, umphakathi awuvumelani ungamshintsha uhulumeni. Uma kusasa bonke abantu beyeka ukudla lokho, ngokwesibonelo, okukhiqizwa yi-Universal, umbuso wabo ubuzoya shit. Uma abantu bengakwenzi, abaphikisi, noma abayisebenzisi kahle inkululeko yabo. Kepha ukhululekile ukwenza kanjalo.
Algoban, ngisishayela ihlombe isimo sakho sengqondo, ngoba ngaphandle kokungabaza yilokho okudingekayo namuhla: umoya wokugxeka.
Kuyiqiniso ukuthi kunemininingwane eminingi, yazo zonke izinhlobo, kepha akuhlali kutholakala kubantu - kungaba ngenxa yokungazi, ukungafinyeleli noma ukufihla. Thatha isibonelo, iziqhingi ezinkulu, ezintantayo zikadoti olwandle engingakaze ngizibone empilweni yami zibizwa ngegama ezindabeni noma ephephandabeni.
Ngiphinde ngithole iziphetho zami, ngiyakholelwa "eqinisweni" lami futhi impilo yami ngiyibhekisa ngendlela yami, ngiphenya futhi ngiphikise, kepha ngiyabona ukuthi kukhona ukuphathwa kolwazi ngokungenakuphikiswa futhi kuyangikhathaza, ikakhulukazi ngoba abantu abaningi bakholelwa abakufundayo ngaphandle kokukucabanga okuncane. Kulezi zinkinga, kuyadingeka ukubhekela izici eziningi, ngisho nezenhlalo, futhi iqiniso ukuthi kunganikeza izingxoxo zangempela, zezinde.
Ngokuqondene nento "yekheji", kuyindlela yokukhuluma. Ngiyayithanda ifilosofi, futhi lapha mhlawumbe into efaneleke kakhulu bekungaba ukubhekisa enganekwaneni yoMgede kaPlato. Kepha hhe, kungumbono wami nje, akusho ukuthi kufanele kube yiqiniso.
Ngokusobala, kunezinye izindlela ezingcono - ngithanda izifufula kangcono - futhi lapha abaphulanga noma yiliphi ilungelo lokukhuluma. Engikuqondayo ukuthi lokhu kuhlasela kunezinhloso zesibili, mhlawumbe ezihlobene neSOPA. Qaphela ukuthi, ngalesi sikhathi, futhi ngokungangabazeki umphumela walokho okwenzekile ngeMegaupload kanye nengcindezi yezenhlalo, ngicabanga ukuthi leso siphakamiso sihoxisiwe.
Umphakathi unamandla, amandla amaningi. Kuthiwani uma ungazi ukuthi unayo? Kumele ubone umoya osulile nowokuthukuthela wezakhamizi kulezi zinsuku, ukwamukelwa okungamukeleki kwezinqubomgomo zikahulumeni, njll. Esikhundleni sokwenza okuthile, bahlala emakhaya - iningi labo. Futhi kimi, ngawodwana, lokho kuyangithinta, ngoba umuntu oyedwa akakwazi ukuguqula uhlelo, noma ngabe befuna kangakanani.
Namuhla sinenkululeko, kodwa uma singayisebenzisi, ingabe siyoba nayo kusasa?
Mayelana nokuhambisana nelungelo lobunikazi e-United States, ukuvalwa bekuseduze, futhi lokho ukuthi abaningi abakunaki, abaqondi, babheka enye indlela noma engikwaziyo, lapho kusobala ukuthi iMegaupload izuze ngendlela engalawulwa futhi engenamahloni ngethrafikhi etholakala kokuqukethwe kanye ukuthengiswa kwemikhiqizo yabo ngezindleko zezindlu okuvikelwa kakhulu ngaphandle kokukhonjiswa koshintsho nokulawulwa. Akusenele ukubuyekeza izibalo zomholo zabaqondisi babo ezisakazwa kunethiwekhi (Ngaphezu kwezigidi ezingama-175 zamadola), ukubheka ubukhulu bemisebenzi yabo, baba osaziwayo!
Ukuthi ngalesi silinganiso abantu abangenacala bayathinteka, impela bayathinteka, futhi nakanjani labo abathintekile bazokwazi ukufaka isimangalo kuziphathimandla, futhi; Kodwa-ke, ngokwami ​​angiwubeki wonke umthwalo kwi-FBI, ngoba phakathi kwamakhono ayo kukhona ukushushiswa, kanye ne-Interpol, yokuziphatha okungenzeka ukuthi kuyicala lobugebengu, kubandakanya nalokho okwephula impahla ye-Intellectual Property, kepha kune-Megaupload uqobo, ukuthi akukho sikhathi lapho befuna ukuvikela insizakalo yayo kulezi zinyathelo ezingenzeka, abakwenzanga lokho, iphutha elikhulu lenkampani enamandla kakhulu ekulandweni kwamafayela kunethiwekhi, nalapho kubonakala khona ukubaluleka okuncane, maqondana nokwethembeka kwensizakalo , ababenazo kubasebenzisi babo "abasemthethweni".
Ngalesi sizathu, ibhizinisi elikhulu elasungulwa ngemuva kwalo alamukeleki, into engahambelani neze nalokho abaningi abakubiza ngokuthi "ukwabelana", kwabiwa ngalo kakhulu ngesifufula kunokuba kulandwe ngqo! Lapho, okwakwenziwe ukugcina izinto ezivikelekile ezazisatshalaliswa kwinethiwekhi ukulanda ngakunye, ukugeleza kwabo ababezazi kahle iziqondiso zabo, futhi lapho bathola khona izigidi zamaRandi ngenzuzo, noma kungenjalo, othile angitshele ukuthi, isibonelo, Megavideo, Ngabe isetshenziselwe ukulayisha amavidiyo emishado nemisa noma kokunye?
Nginesiqiniseko sokuthi imithethonqubo ebekelwe imigoqo ebucayi kakhulu futhi ehlanzwayo ehlongozwayo muva nje ayiyona eyanele kakhulu noma enengqondo, kepha ngiyaqiniseka futhi ukuthi i-intanethi ayikwazi ukuqhubeka njengenkunzi enesibindi eshiyelwe amadivayisi ayo ingilazi, kudingeka izinyathelo, ngokungangabazeki. Ikakhulukazi uma amalungelo omuntu siqu wabasebenzisi namalungelo abo ababhali ahlangana ngendlela esontekile.
Angisayiphathi eyenkululeko yokukhuluma, ngoba abaningi bayayiphambanisa “nokwenza noma yini engiyifunayo” “konke kukhululekile” “ulwazi alunamnikazi”, njll., Ukuvusa amapheya ngamatshe kubhasikidi ofanayo. Ukuzama ukuguqula lowo mqondo kuyimpi yokuhlulwa.
Ngiyabingelela, futhi ngiyaxolisa ngokushaywa kodwa bekungenakugwemeka, ake ngithole okuthile engikufundela i-Law ... xD
Kuhle kodwa kufanelekile.
Kuyacaca ukuthi babengazivikeli futhi bazuze ngqo. Kepha kunzima kakhulu ukukucabanga ngaphandle kokungena kokungabi nabulungisa. Ngingacabanga ngesibonelo sakudala nokuhlukahluka okubili:
1. Wenza imimese uyadayisa. Unikeza insizakalo engadingi ukuthi ibe nenhloso yobugebengu
2. Wenza imimese uyidayise ngenhloso yobugebengu.
Uma kwenzeka i-1 kungeke kube okungekho emthethweni. Uma kwenzeka u-2, kuzofanele ukufakazele lokho, noma ubone ukuthi umenzi wommese uyisihlanganyeli yini. Abaningi bazobona megaupload ku-1 nomunye ku-2.
Kepha kungukuphela kwethu, singazibuza ukuthi kungani megaupload hhayi ezinye izinsizakalo ezifanayo? Kungani kungenjalo i-YouTube?
Futhi omunye umbuzo (njengoba ufundela ezomthetho). Akwanele ngohlelo lwamanje lapho ijaji linquma khona ukuba semthethweni kwekhasi? Yini engalungile ngalolu hlelo?
2. Wenza imimese uyadayisa ukwazi ezinenhloso yobugebengu.
Mayelana namathuba amabili owabhalayo, konke kubhekisele ebufakazini, ngoba ukubumbana akulona ulwazi nje lokwenza izenzo zobugebengu, kepha ukubambisana kwenziwa ekufihleni lo mkhuba owenqatshelwe. Kimi, labo beMega babesendaweni yesibili ye-hypothesis yakho, ngoba base beceliwe ngaphambili mayelana nezinto ezigcinwe lapho, futhi-ke bageza izandla, beshiya umthwalo kubasebenzisi, ngenkathi beqhubeka nokuzimboza. Kungani kungenziwa okufanayo kuwo wonke umuntu? Okungukuthi, kungenzeka kungenxa yokuthi akunakwenzeka ukubaletha ecaleni noma kumasu ezepolitiki.
Umbuzo wakho ngokulawulwa kwezomthetho kulawa macala uyathakazelisa, ngicabanga ukuthi inqubo yokuphatha ingenziwa ngaphambi kokungenelela kwejaji, ukuze lisebenze kuphela maqondana nokuba semthethweni kwesinqumo sokuphatha, angisiboni isidingo salo. ukuthi kumele abambe iqhaza kusukela ekuqaleni. Kepha qaphela, ngikhuluma ngenqubo yokuphatha eyenziwe kahle, hhayi eyokufuna ukwazi, kepha ehlonipha iziqinisekiso zenqubo, inqubo efanele, ilungelo lokuvikela, njll. (Lokhu yikho kanye okugxeka i-SOPA, nama-clones ayo: izindlela zabo ziphikisana kakhulu). Ngamafuphi, ukuphathwa kwezomthetho kungenzeka kube okulandelayo, hhayi njalo ukuthi abezobulungiswa kufanele bangenelele kuqala, lokhu kunjalo, inqobo nje uma kunenqubo yokuphatha yangaphambilini eyenziwe kahle futhi ehlonipha iziqinisekiso zabasebenzisi.
Endabeni yeMega, bekungahlobene nje kuphela nokwephulwa kwelungelo lobunikazi, kepha njengoba abamangalelwa babekwa amacala amaningi, kufaka phakathi imali, kwayalwa njengesinyathelo sokuqapha ukugcinwa kwakho konke lokho kusebenza njengobufakazi bokumangalelwa, njengezimoto, imali, ukuvimba ama-akhawunti asebhange, futhi-ke, amaseva lapho lonke ulwazi lwalusingathwa khona. Ubulukhuni bendaba ukuthi uma ibunikeza inani eligcwele lokuhlola, kungenzeka ukuthi abasebenzisi abanezinto ezisemthethweni babone imininingwane yabo inyamalala, ngoba ukumangalela nokuthatha izinyathelo zomthetho e-United States kubiza ngokweqile, okungenza kube nzima kakhulu kuningi balalelwa enkantolo, noma baze bazwakale esicelweni esisemthethweni.
Njengewebhusayithi, akudingeki ukuthi ngibuyekeze okuqukethwe abasebenzisi abakukhokhelayo. Labo okufanele babheke ukuthi akukho yini ukwephulwa, ababhali abangazinikezela ekugxekeni izixhumanisi futhi i-megaupload ihlale ihambisana ngokubasusa, Labo abangazi futhi abakhulume kakhulu ngoba abazi, ukuthi imidlalo eminingi, imisebe ye-blu, njll. Iyalayishwa ukufaka i-fileserve hhayi i-MU, ngoba i-fileserve kuze kube yilapho isanda kukhokhwa, futhi kwenzeka okufanayo nge-rapidshare, ngakho-ke iningi labalayishi bakwenzela uthando lobuciko. Nginesiqiniseko sokuthi inkantolo izophinda isho ukuthi ama-MU awanacala, njengoba kwenzeka ngeledlule. Ekugcineni, umsunguli we-MU wayeyisiphukuphuku esikhulu ukuhlala ezweni eliyisisekelo sobukhosi base-United States, New Zealand, kufana nokuhlala e-Australia noma eJapan.
Uma kwenzeka ungakubonanga, ukubekwa kwecala kuyatholakala. Kuyi-surreal ukusho okuncane.
Kusuka ekhasini 30 ubona ama-imeyili ayimfihlo phakathi kommangalelwa. Baze badlulise amafayela phakathi kwabo noma bachaze inhloso yokukopisha amafayela avela ku-YouTube. Baze basho izinto ezinjengokuthi abazona izigebengu kodwa banikeza insizakalo kubaphangi.
Uyibonile imoto, konke kukhombisa ukuthi bebesecala lesibili.
Akubonakali kuwumqondo omubi kimi, inqobo nje uma le nqubo yenziwa yizindikimba zombuso ezisobala. Kepha leyo nqubo yokuphatha oyiphakamisayo ingaba nezinyathelo zokuqapha njengokuvalwa okwesikhashana kwewebhusayithi?
I-SOPA, njenge-sinde nabanye, iyingxenye yesisekelo esiyiphutha ngoba ifuna ukulawula i-intanethi ngokusebenzisa izindlela ezingalungile, hhayi ezisobala nezokuxhasa.
Hlola imoto lapho kucacile khona ukuthi i-MU ibikwazi okwenzayo. Ngakolunye uhlangothi, i-MU ibakhokhela abasebenzisi, okungaba yinkinga uma bethola imali yezinto ezivikelwe (sekuvele kuphawuliwe kwamanye amawebhusayithi), ngoba bengasithola isikhalazo.
Ku-mu babekwazi abakwenze kucacile, kepha abakwenzanga futhi lokho kwanele 🙂
Uma uyibona ngokuhlukile, kungenzeka ukuthi usuvele uqale ukuvala i-70% yethrafikhi ye-inthanethi, ungalenzi iphutha, i-intanethi ikhule kakhulu ngenxa yokuphanga.
@ pandev92: Iqiniso lokuthi i-MU ayilayishanga impahla evikelwe ngokwalo alanele ukumthethelela, ngoba isenzo esijeziswayo, ubugebengu, singenziwa ngezindlela ezahlukahlukene: ngokuqondisa, ngokungafanele, ukweqiwa, njll, noma ngo ukubumbana noma ukunquma isenzo, futhi uma ubona ngokusobala, insizakalo eyanikezela kanye nokuziphatha kukonke kwe-MU, kwakuyisimo sokungathandi maqondana nokuphathwa kokusebenzisa okwenziwe abasebenzisi bayo ngensizakalo eyayingabandakanyeki kuyo ngoba babazi ukuthi ibhizinisi layo izongena ngaphansi. Obo budlelwane obuqondile phakathi kwemodeli yebhizinisi le-MU nokuphulwa kwe-copyright, ngaphezu kwalokho, isizathu esiyinhloko sokumangalelwa kwayo. Njengoba u-algoban ekutshele, funda ukuhlinzekwa, ngokujulile.
Mayelana nalokho okushoyo ukuthi ngaphezulu kwengxenye ye-inthanethi kuzodingeka ivalwe ukuze icabange ukuthi ngicabanga kanjani, ayisebenzi, ngoba kunamacala athwele kakhulu kunabanye, wena ngokwakho ushilo ukuthi abanye bakhokha kanjani, labo, labo abazuza ngokungenamahloni isizotha kumele sishushiswe ngobugebengu. Ngaphezu kwalokho, ake ngikutshele okuthile, isijeziso sinomsebenzi wokuvikela jikelele, okusho ukubizelwa kithi sonke ngokungaqhamuki kobugebengu kunikezwe imiphumela emibi ebandakanyekayo, noma ngabe mhlawumbe lapho ubona ukuthi ababambi bonke abantu abaphangi kusho ukuthi akekho okufanele abanjwe? Lokho, okwenzekile nge-MU nakho kuyindlela ebalulekile yokuvusa wonke ama-clones ayo mayelana nensizakalo abayinikezayo nemiphumela engaba khona etholakala ekuziphatheni kwabo.
Ingxenye yayo yonke le nkinga ukuthi, uma ngikhuluma iqiniso, cishe bonke abasebenzisi be-intanethi balande, okungenani kanye, ifayela elingekho emthethweni, hhayi nje elivela Ukulayishwa kwe-Megaupload kepha kusuka kwenye indawo.
Ngizama ukuthini ngalokhu? Ukuthi lolu hlobo lokuziphatha "lujwayelekile" ngokuphelele kwi-WEB nokuthi kimi, i-Intanethi yisayithi elilawulwa amasiko namasiko hhayi ngokomthetho. Kodwa-ke, ukubuswa ukusetshenziswa kanye namasiko akuyona into ehamba phambili ngaso sonke isikhathi ngoba kuncike kakhulu ezingeni lokuziphatha lomphakathi owenza lo mkhuba.
Lesi yisimo lapho, futhi kwenziwa khona, imibhikisho ethi ukuvalwa kwe- Ukulayishwa kwe-Megaupload kuwukuhlasela inkululeko yokukhuluma. Noma ukuqala kokukhawulela leyo nkululeko.
Ingabe lokhu kuyiqiniso ngempela? Ngabe lesi senzo senziwa yi FBI kusho ukuqala kokuphela kwenkululeko yokukhuluma kwi-intanethi? Ngabe kusho ukuthi ifa lamasiko esintu ngeke litholakale kuwo wonke umuntu?
Angicabangi kanjalo. Iqiniso ukuthi angijabule ngokuvalwa kwe- Ukulayishwa kwe-Megaupload ngoba, njengabaningi, ngilahlekelwe yimali -Bengine-akhawunti ye-premium- namahora atshaliwe ekulayisheni ngaphezulu kwe-15Gb. kolwazi -amafayela wokuqamba imidwebo- kepha angikwazi ukungazizwa ngithukuthele lapho ngithola ukuthi labo ababhekele isiza sebethole izaziso eziningana mayelana nezinsolo ezithi zenziwa ngokungekho emthethweni ezenziwayo, Ukulayishwa kwe-Megaupload. Ingabe bawaxwayisile amakhasimende abo? Cha bamane bazimela ukugwema ukuvalwa kwesiza bese beqhubeka nebhizinisi labo ngaphandle kokuxwayisa amaklayenti abo nabasebenzisi besimo sezomthetho kanye nengozi engaba khona yokuthi yonke impahla ebanjelwe kuyo Ukulayishwa kwe-Megaupload, noma ngabe kusemthethweni noma cha.
Ngabe le yinkululeko ye-intanethi esiyifunayo? Angazi ukuthi abanye abantu bacabangani, kodwa angazi. Kepha futhi yini esikuqondayo nge-inthanethi yamahhala? Iyodwa lapho esingaveza khona imibono yethu noma esivumela ukuthi senze noma yini esifuna ukuyenza? Ngokwazi kwami, lokhu kuvalwa kwenkampani eyenza ibhizinisi elingcolile, hhayi indawo yamaphephandaba. Amasayithi we- I-Granma -http://www.granma.cu/- futhi kusuka I-Miami Herald -http://www.miamiherald.com/-ukuqamba amaphephandaba amabili anemibono ehluke ngokuphelele asatholakala. Isiza savalwa ngezizathu zomthetho, hhayi ezepolitiki.
Ukuvalwa kwe- Ukulayishwa kwe-Megaupload ingabe isongela inkululeko esinayo yokushintshanisa isiko nge-WEB? Angicabangi kanjalo. Isiko kuyinto enye futhi ubumnandi bungenye into, ngoba akuwona wonke umculo oyisiko futhi nawo wonke amafilimu. Ngingakholelwa ngempela yini ukuthi kukhona umzabalazo wokugcina ukushintshaniswa kwamasiko kwamahhala, lapho iningi lemilayezo engicwilayo engiyifunde ku-intanethi ibhalwe kabi futhi inamaphutha amakhulu esipelingi kangangokuba nami, ukuthi ulimi lwami lwendabuko isiNgisi nokuthi kuthathe nje Cishe iminyaka eyisishiyagalombili noma eyisishiyagalolunye ngikhuluma futhi ngibhala ngeSpanishi, ngiyakuqonda? Asambe! Kungcono sifunde incwadi enhle esiyidinga kakhulu….
Angijabuli ngalokho Ukulayishwa kwe-Megaupload Kuvaliwe, kepha angicabangi ukuthi ukuhlaselwa kwenkululeko nakho.
Ngabe le yinkululeko ye-intanethi esiyifunayo? Angazi ukuthi abanye abantu bacabangani, kodwa angazi. Kepha futhi yini esikuqondayo nge-inthanethi yamahhala? Iyodwa lapho esingaveza khona imibono yethu noma esivumela ukuthi senze noma yini esifuna ukuyenza?
Yebo, siyefana, ngoba manje imibono engiyifunde yonke indawo igxile kulokho, kokuthi "noma yini esiyifunayo" nokuthi okushoyo ngenkambiso kuyiqiniso ngokuphelele, kuyinkinga yesimo sengqondo, futhi kuyinto ebucayi kakhulu. ukuthi i-Ozcar ebaluliwe yilokho engikholwa wukuthi yinkinga eyisisekelo esidida inkululeko yokukhuluma nokusabalalisa ulwazi:
"Yenza noma yini engiyifunayo" "konke kukhululekile" "ulwazi alunamnikazi", njalonjalo.
Futhi uma singakulungisi, izinto zizoba zimbi kakhulu ngoba ngeke iqhubeke kanjena.
Amazwana amahle, Tina! Ukuqinisekisa elinye lamaphuzu akho, lelo elibhekise emthwalweni wemfanelo we-MU kubasebenzisi bayo. Ezimweni zokusetshenziswa kwensizakalo, iMegaupload iphinde yagcizelela ezigabeni zayo eziningana ukuthi ikhishwe kuwo wonke umthwalo uma kwenzeka yehluleka, nganoma yisiphi isizathu, kufaka phakathi nesomthetho, okuthinte ukuqhubeka kwensizakalo, kanye nesixwayiso Umbhalo ofanayo wokuthi insizakalo yayinengozi eyaziwayo futhi yamukelwa ngamakhasimende ayo eyayinganikezi umsebenzisi ithuba lokuthathela inkampani izinyathelo zomthetho. Kungakho bengazange benze izexwayiso, futhi babengenaso isimo esikahle sokunikeza ukwethembeka nokuvikeleka ekunikezelweni kwensiza kubasebenzisi babo, kepha kunalokho, ukuqhubeka nokugcwalisa amaphakethe abo.
Uma noma ngubani ethanda ukufunda imibandela yesevisi ye-MU, nasi isixhumanisi sokuthi wonke umuntu asibheke:
Ngiyabonga inkulungwane I-Rayonant y Ozcar!
OzcarQaphela ukuthi lesi sigaba saleyo nkontileka yokunamathela sidonsa ukunaka kwami:
Ngaphandle kokubandlulula kwezinye izixazululo zomthetho, iMegaupload ingakhipha ngokushesha isaziso, noma imise (okungukuthi, ukuvimba ukufinyelela nokusebenza kweZinsizakalo zeKlayenti), kungaba okwesikhashana noma ngokungapheli, noma ukunqamula i-akhawunti yeKlayenti bese yenqaba hlinzeka ngezinsizakalo kuKlayenti uma: (a) I-Megaupload ikholelwa ukuthi iKlayenti lephule noma lasebenza ngokungahambisani nalesi Sivumelwano, noma enye yezinqubomgomo zalo; noma (b) iKlayenti lingakhokhi imali noma ezinye izinkokhelo ngenxa yeMegaupload; noma (c) I-Megaupload ayikwazi ukuqinisekisa noma ukugunyaza noma yiluphi ulwazi olunikezwe iKlayenti; noma (d) I-Megaupload ikholelwa ukuthi isenzo seKlayenti singadala isikweletu esisemthethweni seKlayenti, amanye amaklayenti we-Megaupload, noma i-Megaupload. »
Ngokomthetho, ukuhumusha kanjani?
Lesi sigatshana ikakhulukazi ukuthi sisho ukuthini ukuyekelwa kwamalungelo abasebenzisi ngenxa yamathuba wokuqedwa kwenkontileka ngakwelinye izwe ngokuthanda i-MU kuleyo micimbi. Kuleli cala, esigabeni salo (d), i-MU ibinamandla okuveza ukuthi ingenele ukuvikela futhi igweme ukulimala ngenxa yamacala angavela ngenxa yokuziphatha kwabasebenzisi bayo, into njengoba sibona, ibingenandaba nokuyifaka isicelo, ngoba kusobala ukuthi ngabe ngokumelene nebhizinisi lakho. I-MU ibingathatha isinyathelo ukuvikela abasebenzisi bayo bokukhokha ukugwema okwenzekayo, njengamathuluzi ekhredithi yayo, kepha konke kwahlala kuyincwadi efile ngaphakathi kwenkontileka.
Ngakuqonda nokuthi, manje ... ngaphansi kwalowo mqondo, amakhasimende we Ukulayishwa kwe-Megaupload ubamangalele ngokunganaki, ngoba abenzanga lutho ukuvikela amalungelo abo njengoba kushiwo ngaphansi kokucatshangelwa kwalesi sigaba somthetho?
Konke lokhu ngokuqonda ukuthi ukuvalwa kwe- Ukulayishwa kwe-Megaupload Kwakungengenxa yezimbangela ezingabangelwa insiza uqobo lwayo nokuhleleka kwayo.
Kungenzeka yini lokhu?
Inkinga ukuthi… funa kuphi futhi nobani? . Ngabe bazokhalaza ku-MU, ku-FBI, kubani?
Ngamanye amagama, uma i-MU ifunelwa umonakalo (okuyiwona oyisisekelo futhi onengqondo kakhulu), ngabe ubuhhovisi ngemuva kwalokhu kubukeka kanjani? Yebo, angicabangi ukuthi kungenzeka ngokusemthethweni ngaphansi kwale mibandela, ukuthi bayazibuyisela, bazikhokhe noma okunye okunjalo.
Kwamanye amazwe angazi, kepha ku USA umshushisi angaletha labo ababhekele lokhu Ukulayishwa kwe-Megaupload enkantolo ... umbuzo akukhona ukuthi kungenzeka yini, ukuthi izakhamizi ezithintekile zaseNyakatho Melika zifuna ukuvuma ukwenza njalo.
Impela, akusona isimo esisebenziseka kakhulu ngoba ukumangalelwa ngamacala enkantolo kungathatha isikhathi eside, kodwa ukuthi kunga… kungakwenza. Ezweni lami udaba lwamacala enkantolo luyimboni yonke ...: S
Isimangalo sizobe siphikisana ne-MU, kepha kunezingqinamba eziningi, futhi kubhekiselwe kuzo kwinkontileka efanayo. Kuyo, i-MU ikhishwa kuzo zonke izikweletu ezivela enkonzweni abayibophezele kuyo, futhi ibuye ibhalise ukuthi akukho zinyathelo zomthetho ezibhekiswe kubo, ezigabeni "zesinxephezelo", "akukho siqinisekiso", "umkhawulo wesikweletu" futhi inombolo 12.2; Kuqinisekiswa ngokusobala futhi kuphindaphindwa ukuthethelelwa kwesibopho se-MU, njengomhlinzeki wesevisi, ezinkingeni ezikhona, noma ngabe ziyini izimbangela zazo, ezamukelwa yikhasimende futhi lizibhalise. Ngaphezu kwalokho, esigabeni se- "eziningana", amandla namandla okuzwa ukungqubuzana kunqunyelwe (Enkantolo yase-US eCalifornia), kanye nenketho yomsebenzisi yokwenza noma isiphi isenzo kuze kube yizinyanga eziyi-12 ngemuva kwesizathu amaqiniso ayisuselayo.
Ngicabanga ukuthi uma unikezwe okuqukethwe kwenkontileka okushiya umsebenzisi engahlomile futhi okwenza kungasebenzeki kuye, kufanelekile ukuthatha isinyathelo sokufuna ukuba yize kwenkontileka ngenxa yokufakwa kwezigaba ezihlukumezayo futhi ngicele nembuyiselo yezehlakalo eziqondile zomonakalo ohlobene nokuziphatha kwe-MU ekwenziweni kwenkontileka, ukushiya ngokusobala. Inkinga ukuthi ukwenza icala lezici ezinjalo kuyinto eyinkimbinkimbi kakhulu futhi ebizayo kumsebenzisi ojwayelekile, noma ngabe ehlala e-USA. Ngemuva kwalokho, kungcono ukulinda ubone ukuthi ngabe izinyathelo zokuqapha ziyasuswa yini noma uma ngemuva kokulawulwa kokusemthethweni kwento eqoqiwe, kwenziwa ukubandlululwa phakathi kolwazi olunikeza amandla okuhlola kanye nalawo, ezimweni zombili isinqumo besizowela enkantolo okuholela lesi sigameko. Uma kungenzeki kulawa maqiniso amabili, ngicabanga ukuthi inqubo ethile ingaqalwa ngokumelene ne-FBI, kepha iqiniso ukuthi angizazi izinkambiso zenqubo yaseMelika ezivumela ukwephula uchungechunge lokugcinwa kwempahla yobufakazi ebulelwa ecaleni.
Umlayezo ongaziwa lapho kuvalwa iMegaupload